भा`रत बाट फेरि आयो अर्को ख-तरनाक काे-राेना भेरियन्ट, खोपले समेय काम नगर्ने ! सुरक्षित रहन आग्रह – Sapana Sanjal
भा`रत बाट फेरि आयो अर्को ख-तरनाक काे-राेना भेरियन्ट, खोपले समेय काम नगर्ने ! सुरक्षित रहन आग्रह
June 16, 2021 97
Sapana Sanjal : भा`रत बाट फेरि आयो अर्को ख-तरनाक काे-राेना भेरियन्ट, खोपले समेय काम नगर्ने ! सुरक्षित रहन आग्रह । महा-मारी सेलाउन नपाउँदै को-भिडले नयाँ नयाँ भेरियन्ट परिवर्तन गर्न थालेको छ । भा-रत बाट फेरी अर्को ख-तराको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार महा-मारीको दोस्रो लहर फैलिरहेको बेलामा फेरी नयाँ भेरियन्ट फेला परेको हो जसलाई खोपले पनि प्रभाव पार्न सकेको छैन । यो थप संक्रामक रहेको र यसले मासिनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामै ह -म -ला गर्ने भाइरस भएको बताइएको छ । डेल्टा उत्परिर्वतन भएर बनेको नयाँ भेरिएन्टलाई भा-रतका वैज्ञानिकले ‘डेल्टा प्लस’ नामकरण गरेका छन् ।
यो थप संक्रा-मक रहेको चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुले बताएका अहिलेसम्म यो नयाँ भेरिएन्ट भारतका ६ राज्यमा ८ वटा नमुनामा पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म यो म्युटेसन फैलिएको बारे वैज्ञानिकलाई थाहा हुन सकेको थिएन किनकि भा-रतमा जिनोम सिक्वेन्सिङ पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छैन ।
गत अप्रिल ५ देखि मे १५ सम्म परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये ८ वटामा नयाँ म्युटे-सन -डेल्टा प्लस- देखिएको हो । जुन नमुना सबै डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमित थिए । भा-रतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो भेरिएन्ट सबैभन्दा बढी तमिलनाडुमा ३ बिरामीमा देखिए पछि परिक्षण गरिएको थियो । त्यसवाट भा-रतमा यसले अन्य राज्यमा पनि प्रभाव पारिसकेको खुलेको थियो ।
यस बाहेक महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिसा, कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशका एक एक संक्रमितमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट देखापरेको छ । दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश र राजस्थानका नमुनाको पनि सिक्वेन्सिङको नतिजा आउन बाँकी छ। खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि यसवारे सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । नेपालमा पनि यो भेरियन्ट भित्रन सक्ने ख-तरा रहेकाे छ ।
Prevपाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, असार २ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextसिन्धुपाल्चोकमा बाढीको वितण्डा : ५० जना मान्छे बेपत्ता, बजार बन्यो हेर्दाहेर्दै बगर (१५ तस्विर सहित)
चौधरी ग्रुपको नवलपरासीस्थित बियर फ्याक्ट्रीमा भीषण आगलागी, बिनोद चौधरी पनि पुगे (६ तस्विर सहित)
सार्है मार्मिक दृश्य” छोरीले गरिन आमाको काजक्रीया”!
कोभिड-१९ भ्याक्सिन लगाएपछि एक पुरुष पुरुषको मृत्यु